အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ညီစေဗျာ သူငယ်ချင်းတို့
ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဖို့အတွက်...
ပြည်သူ (၅) သန်းနီးပါး လက်မှတ်ထိုးထားပါတယ်
အစိုးရမီဒီယာနဲ့ခရိုနီမီဒီယာအားကိုး..မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ ရပ်ကွက်က ..
မျက်မှောက်ခေတ်မှာ လုံးဝ(လုံးဝ) မရှိခဲ့ဖူး ဆိုတာပါပဲ..။
ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ ၄၃၆ ပြင်မဲ့ လူထုလှိုင်းကြောင့်..
မြှင့်တင်ခြင်း ( Third Wave) ဆိုပြီး..
ကမန်းကတန်း စတင်ခဲ့တာကို ..
အစိုးရနဲ့ ဌာနဆိုင်ရာတွေရဲ့ ...
အစိုးရကပဲ ပြန်ပြီး ...
ဖွှံ့ဖြိုးမှု ကမ္ဘာ့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ..
ဖွတ်ပါတီ တိုင်းပြည်ကို စာရင်းလိမ်ပြသလို
ခပ်မွဲမွဲ အရပ်ဝတ်ဝတ်ပြီး..လူမသိသူမသိ တိုင်းပြည်ကိုလေ့လာမှပဲ
၂၄ နာရီ ရေမီးအစုံ ရရှိနတဲ့
နေပြည်တော်မြို့ရဲ့. မြို့မဈေးလောက်ကို လည်ပတ်ပြီး
အပြည့်အ၀ အသုံးချပြီး ..
အပြစ်ပုံချမဲ့ အနေအထားတွေကို ကာကွယ်ပေးတဲ့
ကျန်တာ ဘာမှ လုပ်ကိုင်သွားတယ်လို့ကို
ဘယ်သူမပြုမိမိမှု အနေနဲ့ ငြိမ်နေရပါတယ်..။
တိုင်းပြည်အတွက် ၊ ပြည်သူအတွက် အဓိကကျတဲ့
အချက်တွေမဆွေးနွေးပဲ PR ကိစ္စတွေဘာတွေကအစ
ပြည်သူ ၅ သန်းက..
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 10:32 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook